ဘားမရှိဘဲစည်းလုံးညီညွတ်မှု, Ubuntu update ပြီးနောက် icon သို့မဟုတ်ခလုတ် – တေလာ Lopes ツဘလော့
ဘားမရှိဘဲစည်းလုံးညီညွတ်မှု, Ubuntu update ပြီးနောက် icon သို့မဟုတ်ခလုတ်
ဗားရှင်းတစ်ခုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် 16.04 Ubuntu လုပ်ပါ, လုပ်ငန်းခွင် / Desktop Unity ဟာအချည်းနှီးပဲ, ရုံနောက်ခံပုံ, မည်သည့်ဘားမပါဘဲ, အိုင်ကွန်များသို့မဟုတ်ခလုတ်များ. မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကြည့်ပါ!
Ubuntu ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင် 16.04 အီး, ထူးဆန်းတဲ့ login ပြီးနောက်, ဘာမှပြသခြင်းမရှိပါ, Unity နောက်ခံပုံမှလွဲ။.
အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါဟာငါ့မှတ်စုစာအုပ်မောင်းသူနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်, တစ် Dell 7000 Intel ဗီဒီယို HD ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူစီးရီး 5500. ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး!
ငါ Unity ကို reset ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူး, ထိုကဲ့သို့သောအချို့အမှားများကိုပေးခြင်း:
(လုပ်ငန်းစဉ်:3694): ကမ္ဘာကျော်-သတိပေးချက် **: g_spawn_sync သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ(), ထွက်ပေါက် ကလေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်အတန်းကိုတောင်းခံခဲ့သော်လည်း ECHILD ကိုစောင့်ဆိုင်းသူမှလက်ခံရရှိခဲ့သည်(). ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်စဉ်ကို SIGCHLD လျစ်လျူရှုနေသည်, သို့မဟုတ်အချို့သောအခြားချည် waitpid invoking ဖြစ်ပါတယ်() nonpositive ပထမ ဦး ဆုံးအငြင်းအခုံနှင့်အတူ; ဖြစ်စေအပြုအမူနိုင်ပါတယ် ချိုး applications များ အသုံး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ g_spawn_sync.
(လုပ်ငန်းစဉ်:3694): dconf-သတိပေးချက် **: dconf သို့ပြောင်းလဲမှုများကျူးလွန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်: command line ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမှား 'dbus-launch --autolaunch = 5e4fcd4edf7a4496a6dd9153c89c2566 --binary-syntax --close-stderr': အချက်ပြမှုဖြင့်သတ်ဖြတ်ကလေးလုပ်ငန်းစဉ် 68...
ညီညွတ်ရေး .reset (လုပ်ငန်းစဉ်:3694): GLib- သတိပေးချက် **: g_spawn_sync သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ(), ကလေးဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ထွက်ပေါက်အခြေအနေကိုတောင်းခံခဲ့သော်လည်း ECHILD ကိုစောင့်ဆိုင်းခံရသည်(). ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်စဉ်ကို SIGCHLD လျစ်လျူရှုနေသည်, သို့မဟုတ်အချို့သောအခြားချည် waitpid invoking ဖြစ်ပါတယ်() nonpositive ပထမ ဦး ဆုံးအငြင်းအခုံနှင့်အတူ; အပြုအမူတစ်ခုခုသည် g_spawn_sync အသုံးပြုသော application များကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေဖြစ်စေချိုးဖောက်နိုင်သည်. (လုပ်ငန်းစဉ်:3694): dconf- သတိပေးချက် **: dconf သို့ပြောင်းလဲမှုများကျူးလွန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်: command line လိုင်းပြrorနာ 'dbus-launch --autolaunch = 5e4fcd4edf7a4496a6dd9153c89c2566 --binary-syntax --close-stderr': အချက်ပြမှုဖြင့်သတ်ဖြတ်ကလေးလုပ်ငန်းစဉ် 68...
အများအပြား command များကြိုးစားပြီးပြီးနောက်, ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ Unity plugin ပြန်ယူဖို့ graphical method ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ, အောက်ပါလုပ်နေတာ:
Terminal ကို Ctrl + Alt + T သုံးပြီးဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် desktop ပေါ်မှာညာဖက်နှိပ်ပြီးရွေးပါ “Terminal ကိုဖွင့်ပါ” (Terminal ကိုဖွင့်ပါ) သို့မဟုတ် Ctrl + Alt + F1 ကို နှိပ်၍ လော့ဂ်အင် လုပ်၍ TTY ကိုပြောင်းပါ.
ထည့်သွင်းပါ “compizconfig-settings ကို - မန်နေဂျာ”, အောက်ပါ command ကိုကွပ်မျက်:
sudo apt-compizconfig ကို install ရ-ချိန်ညှိချက်များ-မန်နေဂျာ
ထိုအခါ, ပရိုဂရမ်ကိုလှိမ့်ပါ (CompizConfig) ဒီကို run:
ပြသရန်=:0 ccsm &
ဖော်ပြ =:0 ccsm &
သတိပြုရန်မှာ CompizConfig configuration manager မျက်နှာပြင်ရှိလိမ့်မည်.
ပွောဆို: သငျသညျခြေလှမ်းအတွက် TTY ပြောင်းလဲသွားလျှင် 1, Ctrl + Alt + F7 ကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ် Ctrl + Alt + F8).
Ubuntu Unity Plugin နှင့် OpenGL ရွေးစရာများကိုဖွင့်ပါ. ငါသည်လည်း Window Manager ကိုအမျိုးအစားများအတွက်ရွေးချယ်စရာအားလုံး enabled (Windows စီမံခန့်ခွဲမှု) နှင့်အလုပ်Areaရိယာ (Desktop), အခြားအပေါင်း.
ရလဒ်ကိုကြည့်ရန်ပြန်လည်စတင်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည် (ငါ၏အမှု၌, မဟုတ်ခဲ့!). သင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, terminal ကိုပြန်သွားပါ
ဒါကြောင့်ဖွင့်, ငါ့ကိုကူညီသောအရင်းအမြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
စုစုပေါင်း access: 1760
2 သြဂုတ်လ 2016 တေလာ Lopes	ubuntu 16, ကွက်လပ်, ခလုတ်မပါဘဲစည်းလုံးညီညွတ်ရေး, ဗလာစည်းလုံးမှု
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ. တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာနှင့်အတူမှတ်သားထားတဲ့ *
အခြားတိုင်းပြည်ကနေ key ကိုအတူ Kaspersky ဖွင့်ပေးခြင်း (ဒေသ) ဤသည်မှာပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် "activation code ကိုဒီဒေသအဘို့မမှန်ကန်", အခြို့သောသော့သာအချို့သောဒေသများထံမှသုံးနိုငျတဲ့ကန့်သတ်လည်းမရှိကတည်းက (နိုင်ငံပေါင်း). Problema Quem fe...
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.052.140 ဝင်ရောက်ခွင့်